डा. केसीको जीवन रक्षा – Yug Aahwan Daily
डा. केसीको जीवन रक्षा
युग संवाददाता । ६ आश्विन २०७७, मंगलवार १२:०३ मा प्रकाशित
नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु छन् । सेवाको नाममा मेडिकल शिक्षामा व्यापार भइरहेको छ । सर्वसाधारणले पढ्नै नसक्ने गरी महँगो बनाइएको छ । योग्यता र क्षमता भएर पनि मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आज धेरै अभिभावकले आर्थिक अभावमा आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर पढाउन सकेका छैनन् । महँगो शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा नै हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर अहिले पनि कर्णाली लगायतका दुर्गमका बासिन्दाले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । अझ भनौं सरकारी लगानीमा भएका मेडिकल कलेजहरुमा चरम राजनीति हुने र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भरपर्दो सेवा छैन । यही कारण स्वास्थ्यमा व्यापार भइरहेको छ । नागरिकहरु सामान्य उपचारका लागि पनि निजी अस्पताल र मेडिकलमा धाउन बाध्य छन् । जहाँ उनीहरु आर्थिक रुपमा शोषणमा परिरहेका छन् । यही बेथितिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले बारम्बार सत्याग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।
डा. केसीले उठाउका मागहरु नागरिकको हितमा छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो पटक जुम्लामा जारी १९ औं अनशनको मुख्य माग नै कर्णालीको पक्षमा छन् । जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएस कक्षा संचालन गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित कर्णालीका नागरिकका लागि दुर्गममै दक्ष डाक्टर उत्पादन गर्नका लागि पनि केसीको यो माग कर्णालीका लागि हितकर नै छ । तर सरकारले डा. केसीका मागहरु बारे सम्झौता गर्ने र आन्दोलन स्थगित भएपछि कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण समस्या देखिएको छ । १९ औं पटकसम्म अनशन बस्नुपर्ने गरी सरकारले वेवास्ता गर्दा समस्याहरु थप बल्झिएका छन् । भदौ २९ गतेदेखि जुम्लामा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बन्दै गएको छ । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि बेला तलमाथि हुने देखिएको छ । यसकारण पनि यतिबेला उनको जीवन रक्षाको विषय मुख्य बनेको छ ।
उनको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ । नागरिकको जीवन जोगाउन सत्याग्रहमा बस्दा डा. केसी आफै असुरक्षित हुनु दुर्भाग्य हो । तसर्थ डा. केसीले शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि सारेका मागहरुको सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ । वार्ता, छलफल र समाधानका लागि राज्यको अभिभावक भएका कारण पनि सरकारले नेतृत्व गर्न जरुरी छ । नेपालको मेडिक शिक्षालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनै पर्दछ । त्यसमा पनि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमा मृत्युवरण गर्न बाध्य कर्णालीका नागरिकको जीवन बचाउन पनि डा. केसीका मागहरुको सम्बोधन होस् । यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहजिकरण गरेर डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गरोस् । डा. केसीका जीवन रक्षासँगै मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा उपचार अभावमा प्राण त्याग्न बाध्य सर्वसाधारणको पनि जीवन रक्षा हुनेछ ।